Instagram: oo lagu kabayo galkaaga xirfadeed | Abuurista khadka tooska ah
Alicia gonzalez | | shabakadaha bulshada
Dad yar oo adduunka ah ma ogaan doonaan Instagram, mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu caansan xilligan. Waxaan u baranay inaan u adeegsano barxadkan qaab aan aduunka ugu muujinno maalinteena maanta, iyo waliba sawiro iyo muuqaalo. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay inaan ka heli karno wax badan oo aan abid qiyaasi karno.
Ayaa hada ah mid ka mid ah shabakadaha bulshada ugu caansan iyo tiro aad u tiro badan oo diiwaangashan, waa muuqaal kaliya waxayna u oggolaaneysaa falanqeyn saameyn dhammaystiran in lagu sameeyo Maxaa diidaya in looga faa’iideysto shabakaddan bulshada qalab isgaarsiineed?
1 Sida loo isticmaalo Instagram?
2 Falanqee xaaladaada
3 Qorshee waxyaabahaaga
4 Qaado sawirro tayo leh
5 Ha badin jees jees
6 Abuur quudin isku mid ah
7 Si joogto ah ugu dhaji waxyaabaha
8 Isticmaal haghtags-ka
9 Noqo isticmaale firfircoon
Sida loo isticmaalo Instagram?
Qof kastaa wuxuu ku yeelan karaa koonto barta 'Instagram' oo wuxuu ku muujin karaa shaqadiisa, laakiin waxaa jira siyaabo badan oo loo sameeyo. Waxaan kugula talineynaa qodobo aad maskaxda ku hayso. Hadaad dhaqan gasho, hubaal waad badali doontaa astaantaada 'Instagram' ee faylalka xirfadleyda dhabta ah, hel aragti iyo hel macaamiil cusub.
Kahor intaadan bilaabin soo dejinta waxyaabaha sida u baahan, isweydii su’aalo taxane ah:
Maxaan doonayaa inaan ku muujiyo astaanta Instagram-ka?
Waa maxay ujeedooyinka mashruucan?
Maxaan rabaa inaan ku gudbiyo qoraalladayda?
Ma hayaa waxyaabo xiiso leh oo aan wax ku baro?
Immisa jeer ayaan awoodi doonaa inaan soo dejiyo waxyaabaha ku jira?
Qaar badan oo ka mid ah su'aalahan way fududaan doonaan in laga jawaabo, kuwa kalena waxaa laga yaabaa inaad ku booqato mashaariicdaada xirfadeed oo aad u kala horeysid. Waxa kale oo uu qabaa in barxadani u adeegto sidii kaabaya resumeygaaga, sidaa darteed waxyaabahaagu waa inay ka hadlaan adiga iyo shaqadaada.
Instagram profile @mvantri ee farshaxanka Marco Vannini
Waxaad horeyba u ogtahay sida aad ugu dhawaaneysid astaantaada, dareenka aad rabto inaad u gudbiso adeegsadaha iyo hadafyada aad naftaada u dejisay.
Halkaa markay marayso, waa muhiim inaad qorshaysato taas oo waxyaabaha ay noqonayaan iyo sida aad u muujinayso.
Dalxiis ku samee mashaariic xirfadeed, xulo kuwa aad aaminsantahay inta badan xiiso leh ama kuwa dareema qanacsanaanta ugu badan iyo, dhanka kale, kuwa aan aad u dhalaalayn laakiin sidoo kale xirfadlayaal ah oo muujiya qaabka shaqadaada.
Ka cadeynta waxa aad muujineyso waa muhiim waxayna ka dhigeysaa qodobadan soo socda kuwo aad u fudud.
Qaado sawirro tayo leh
Abuuritaanka sawirro wanaagsan waa muhiim. Hubso in dhammaan sawirradu ay isku mid yihiin, taas oo ah, inay daacad u yihiin qaabkaaga. Dhanka kale, ha ilaawin in sawirada aad qaadaysaa ay leeyihiin iftiin fiican oo ay si fiican diirada u saaraan, sidaa darteed toogashada ka hor, u fiirso. Sawirro la qaaday iyada oo aan laga filayn ma muujinayaan tayo.
Ha badin jees jees
Isticmaalka jees jeesku waa aalad ku habboon in lagu muujiyo shaqadaada, laakiin ha ku dhaafin adoo adeegsanaya, waxay kordhin doontaa tayada shaqadaada haddii sawirada lagaa qaado.
Abuur quudin isku mid ah
Markaad sawirada qaadaneyso, ka feker sida ay dhamaantood iskaga wada eegi doonaan shabakadaada. Way ka soo jiidasho badan tahay isha waxayna siisaa aragti fiican shabakad si fiican loo shaqeeyay, oo leh qoraalo loogu talagalay inay u shaqeeyaan shaqsi ahaan iyo koox ahaanba. Taasi waa sababta labada qodob ee ugu horreeya ay aad muhiim u yihiin, haddii aad si cad uga hadlayso waxa aad rabto inaad gudbiso oo aad si sax ah u qorshaysay daabacadaha aad raadinayso, qodobkani wuxuu noqon doonaa mid aad u fudud!
Nacaybtire Instagram Profile @muniir_aqaa
Si joogto ah ugu dhaji waxyaabaha
Kaliya uma baahnid inaad soo dejiso waxyaabaha tayada leh, laakiin sidoo kale isticmaaleyaashu waa inay dareemaan inaad firfircoon tahay. Samee qorshe oo go'aamiso inta daabacaad ee aad samayn doontid bil kasta iskuna day inaad ixtiraamto. Haysashada muuqaal jilicsan maahan wax soo jiidasho leh.
Haghtags waa aalad fiican oo aad naftaada ku ogeysiin karto, markaa waa qalad in aanad adeegsan. Falanqee kuwa ugu caansan haghtags gudahaaga oo aad isticmaasho, in kastoo iska jir! inaad si xad dhaaf ah u isticmaasho sidoo kale ma fiicna; caqli yeelo oo ku dar kaliya kuwa ku habboon mawduucaaga.
Noqo isticmaale firfircoon
Marka lagu daro gelinta waxyaabaha si joogto ah, Raac isticmaaleyaasha kale ee isku walaacsan, samee faallooyin, u jawaab kuwa kula soo xiriira oo had iyo jeer la soco.
Hadaf kasta oo aad naftaada u dejisid, ma sahlana inaad ku guuleysato, marka ha ku jahwareerin hadaadan helin natiijooyinkii aad si dhakhso leh u rabtay. U adeegso qalabkan taageero ahaan markaad muujineyso shaqadaada, u isticmaal inaad ku kabto meheradaha kale kuna raaxeyso inaad sida ugu badan uga faa'iideysato hal-abuurkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » shabakadaha bulshada » Instagram: oo lagu kabayo galkaaga xirfadeed